Wararkii ugu dambeeyay qalalaasaha dalka Armenia
Dibadbaxyadii looga soo horjeeday dowladda Armenia ee dalkaasi ka socday ayaa la hakiyay.
Hakinta dibadbaxyada ayaa ka dambeeysay ka dib markii xisbiga Jamhuuriga ee haya talada dalkaasi ay sheegeen in ay tageerayaan hogaamiyaha mucaaradka ee horkacaya dibadbaxyada Nikol Pashinyan in uu noqdo rai'sul wasaaraha dalkaasi.
Tobannaan kun oo qof oo ah taageerayaasha hogaamiyahan ayaa isugu soo baxay wadooyiinka caasimada dalkaasi ee Yerevan.
Hogaamiyaha xisbiga talada haya ee dalkaasi ayaa baarlamaanka u sheegay in toddobaadka soo socda ay taageeri doonaan musharax ay soo xushaan saddex meelood laba meel baarlamaanka dalkaasi.
Ma uusan xusin magaca Mr Pashinyan oo ah ninka horkacaya dibadbaxyada dalkaasi ka socda.
Dadka dibadbaxa dhigaya ee dalkaasi ayaa waxa uu dibadbaxooda ka bilaabmay isbadal lagu sameeyay dastuurka dalkaasi, taasi oo keentay in awooda laga wareejiyo madaxweynaha dalka, loona weeciyo raysal wasaaraha.
Turkiga oo shaaciyay kaalintiisa wadahadalada DF iyo Somaliland
Soomaliya 24.01.2019. 15:38
Madaxweyne Muuse Biixi ayaa dhawaan sheegay in Somaliland joojisay wadahadalka DF.
Turkiga oo laga qaaday xaaladdii deg deg ahayd ]Sidee shacab u saameysay?]
Caalamka 19.07.2018. 13:57
Farmaajo oo dalka kusoo laabtay xilli la xiray mas'uuliyiin
Soomaliya 20.08.2018. 13:54
Madaxda Kurdiyiinta oo shacabka Afrin ugu baaqay in ay Turkiga la dagaalamaan
Caalamka 24.01.2018. 05:50
Xisbiga Erdogan oo guul-darrooyin kala kulmay doorashada dowladaha hoose
Caalamka 01.04.2019. 16:21
Safaaradda Mareykanka ee Turkiga oo Weerar lagu qaadey
Caalamka 20.08.2018. 13:38
Muxuu yahay Ujeedka safarka Khayre ee Turkiga?
Soomaliya 25.10.2017. 00:57